Fandaminana fitehirizana - Gazety "Rafitra ovy"
Ny trano fitehirizana legioma mangatsiaka dia haorina ao amin'ny faritr'i Moskoa
Bacteriophages dia hanampy hiady blackleg
Tena LOHATENY Trend / Trend Fandaminana fitehirizana
Mitahiry ovy tsy mitsimoka
Ny fandraràn'ny Vondrona Eoropeana ny fampiasana ny chlorprofam ho fanafody manohitra ny tsimoka ho an'ny ovy dia nanan-kery nanomboka tamin'ny taon-dasa. Amin'ity tranga ity, ny Eoropeana ...
Nisy fivarotana legioma maoderina nisokatra tany Dagestan
Nanomboka niasa tao amin'ny faritr'i Karabobhkent ao Dagestan ny fitahirizana voankazo sy legioma maoderina. Hamaly ny fitakiana legioma sy voankazo ary voaloboka any amin’ny faritra...
Fitehirizana ovy ho an'ny 40 arivo taonina eo am-panamboarana any Belarosia
Ny trano fitehirizana ovy vaovao ao amin'ny toeram-pambolena Diana (distrikan'i Shklov, faritra Mogilev) dia amboarina amin'ny alàlan'ny teknolojia avo lenta indrindra. Izy io dia amboarina amin'ny fijerena ny fivoaran'ny famokarana amin'ny ...
Ny fitehirizana ovy 16 taonina dia napetraka tao Okraina
Ny Continental Farmers Group dia naniraka trano fitehirizana ovy vaovao. Ny famatsiam-bola tamin'ilay tetikasa dia nahatratra UAH 111,4 tapitrisa. Mitahiry ovy misy faritra mihoatra ny 6 ...
Ny iray amin'ireo lafin-javatra manan-danja izay misy fiantraikany mivantana amin'ny fiarovana ny voly ovy dia ny toetry ny ovy voatahiry. Ny tsara indrindra dia ny ovy no jinjaina ...
Ny fametrahana tsipika famokarana fries frantsay dia vitaina ao amin'ny fitoeram-pandrefesana Tolochin
Ny fametrahana tsipika famokarana fries frantsay dia vita ao amin'ny Cannery Tolochin (Repoblikan'i Belarus). Aorian'ny fandefasana azy dia ho afaka hampihatra amin'ny fomba mahomby ny orinasa ...
Hasiana tahiry ovy vaovao ao amin'ny faritra Kostroma
Ao amin'ny faritry ny orinasa fambolena Mechta ao amin'ny faritr'i Kostroma, dia hisy trano fitehirizana haorina ho an'ny vokatra 2000 taonina. Governoran'ny Faritra Kostroma Sergei Sitnikov ...
Hisokatra ny fitehirizana ovy lehibe aorian'ny fanarenana any amin'ny faritra Moskoa
Ny minisitry ny fambolena sy ny sakafo any amin'ny Faritra Moskoa, Sergei Voskresensky, dia hanokatra trano fitehirizana ovy lehibe ao amin'ny distrikan'ny tanànan'ny Taldom aorian'ny fanarenana ny 6 septambra ...
Mitahiry ovy sy teboka fanaintainana
Ny iray amin'ireo mari-pahaizana dinihina rehefa mifidy karazana dia ny fitazonana ny kalitao. Ankoatra ny maha-maniry ny ovy dia mila tehirizina ihany koa izy ireo. Inona...
Tamin'ny 1 Janoary 2020, ny lalàna Chohibprofam Prohibition Act (CIPC) dia nanomboka nanan-kery tao amin'ny EU. Raha tsiahivina, noraran'ny UE ny fampiasana an'ity ...
Fanadihadiana momba ny fangaro varietal an'ny legioma malalaka any amin'ny faritra Russia
Ny zava-maniry fambolena ovy vaovao dia miomana hanomboka